Bulshooyinka | Laga soo bilaabo Linux
Bulshada softiweerka bilaashka ah waxay ka kooban yihiin dadka isticmaala softiweerka bilaashka ah iyo horumariyeyaasha, iyo waliba taageerayaasha dhaqdhaqaaqa software-ka bilaashka ah. Liiska soo socda ayaa ah (aan dhammaystirnayn) beeshan iyo ururada waaweyn ee ka kooban.
1.3 Mu'asasada Vía Libre
2.5 Kooxaha Isticmaalaha Linux (Isbaanish)
3.4 Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Mexico
5.1 Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Paraguay
6.2 Kooxda Isticmaalaha Linux - Uruguay
7.2 Kooxda Isticmaalayaasha Peru Linux
8.4 Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Chile
8.5 Beelaha kale
10.2 Kooxda Isticmaalaha Linux - Ecuador
12.2 Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Bartamaha Ameerika
13 Caalami ah
USLA waxay u taagan tahay "Isticmaalayaasha Barnaamijka Bilaashka ah ee Argentine". Waxaa la dhihi karaa waa "hooyada" dhammaan ururada Software-ka Bilaashka ah ee Argentina. Waxay isu keentaa Kooxaha Isticmaala Software-ka Bilaashka ah iyo ururo kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa hoos ku faahfaahsan.
Kooxaha kale ee isticmaala waa:
CaFeLUG: Kooxda isticmaaleyaasha Linux ee Caasimadda Federaalka.
GUULEYSIGA: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Cordoba.
Linux Santa Fe: Kooxda adeegsada Linux ee Santa Fe.
LUGNA: Kooxda isticmaaleyaasha Linux ee Neuquén.
gulBAC: Kooxda isticmaaleyaasha Linux ee Xarunta Murtida. Bs. As.
LUGLi: Kooxda isticmaaleyaasha softiweer ee bilaashka ah.
Gugler: Kooxda isticmaalaha Entre Ríos.
LUGMen: Kooxda Isticmaala Software-ka Bilaashka ah ee Mendoza.
LANUX: Kooxda isticmaalaha Lanús Linux.
Ururka SOLAR ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bulshada Rayidka ah ee Argentina waxaa la aasaasay 2003 iyadoo ay xubno ka yihiin dhaqdhaqaaqa software bilaashka ah ee Argentina. Ujeeddooyinkeedu waa inay dhiirrigeliyaan tikniyoolajiyadda, bulshada, anshaxa iyo siyaasadda ee barnaamijyada bilaashka ah iyo dhaqanka xorta ah, iyadoo la abuurayo goob dabiici ah oo matalaadda iyo isku dubaridka shaqsiyaadka, bulshada iyo mashaariicda. Hawlaheeda ugu muhiimsan waxay la xiriiraan faafinta Software-ka Bilaashka ah ee heer gobol, ururada bulshada iyo qeybaha bulshada ee la takooro.
SoLAr waxay si firfircoon ulashaqeeysaa hay'adaha qaranka sida INADI (Machadka Qaranka ee kahortaga Takoorka, Xenophobia iyo Cunsuriyada), INTI (Machadka Farsamada Warshadaha Qaranka), ASLE (Baaxadda Barnaamijka Bilaashka ah ee Gobolka), degmooyinka iyo jaamacadaha ka yimid Argentina.
Mu'asasada Vía Libre
Fundación Vía Libre waa urur rayid ah oo aan macaash doon ahayn oo laga aasaasay magaalada Córdoba, Argentina, kaasoo tan iyo 2000 raacaya isla markaana dhiirrigelinaya himilooyinka barnaamijka bilaashka ah kuna dabaqaya faafinta bilaashka ah ee aqoonta iyo dhaqanka. Waxqabadyadeeda kala duwan waxaa ka mid ah faafinta Software-ka Bilaashka ah ee dhinacyada siyaasadda, ganacsiga, waxbarashada iyo arrimaha bulshada. Mid ka mid ah shaqooyinka udub dhexaadka u ah shaqada waa xiriirka ay la leedahay saxaafadda1 iyo faafinta qalabka wacyigelinta arrimaha ay ka hadlayso.
Waa rugta Argentine ee shirkadaha softiweer ee bilaashka ah. Waa si sax ah koox shirkado ah (xirfadlayaal madax banaan –monotributistas gaar ahaan- kuma jiraan sharciga CAdESoL dhexdiisa) oo ku saleysan jamhuuriyada Argentina isla markaana u heellan ujeeddooyinka CAdESoL iyo qaabka ganacsiga bilaashka ah ee software-ka. Ku biirista, shirkadda waa inay ansixiyaan guddiga maamulka.
Gleducar waa mashruuc waxbarasho oo bilaash ah oo ka soo ifbaxay dalka Arjantiin sanadkii 2002. Intaas waxaa sii dheer, waa urur rayid ah oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo tikniyoolajiyadda.
Gleducar waa bulsho madaxbanaan oo ka kooban macalimiinta, ardayda iyo u dhaqdhaqaaqayaasha waxbarashada ee kuxiran danta guud ee shaqada wadajirka ah, dhismaha iskaashiga aqoonta iyo qaybinta bilaashka ah.
Mashruucu wuxuu ka shaqeeyaa mawduucyo kala duwan sida aqoon bilaash ah, waxbarasho caan ah, waxbarasho jiif ah, barasho wada shaqeyn ah, tikniyoolajiyad cusub oo bilaash ah wuxuuna kobcinayaa adeegsiga barnaamijyada bilaashka ah ee iskuulada sidii qaab waxbarasho iyo farsamo, iyadoo hadafkeedu yahay a isbeddelka muuqaalka wax soo saarka, dhismaha iyo faafinta nuxurka waxbarashada.
Waxay ka kooban tahay beel waxbarasho oo iskood isu abaabushay, oo loo sameeyay NGO (urur rayid ah) oo ka jawaabaya danaha iyo ujeeddooyinka bulshada.
BuenosAiresLibre, oo sidoo kale loo yaqaan BAL, waa koox u heellan horumarinta iyo dayactirka shabakad dijitaal ah ee bulshada ee Buenos Aires (Argentina) iyo hareeraheeda iyadoo la adeegsanayo teknolojiyad wireless ah (802.11b / g). Waxay leedahay in ka badan 500 noodh oo ku gudbiya macluumaadka xawaaraha sare ku socda.
Ujeedada BuenosAiresLibre waa in la abaabulo shabakad xog, bilaash ah iyo beel ka mid ah Magaalada Buenos Aires iyo hareeraheeda iyada oo ah qaab bilaash ah oo lagu bixiyo waxyaabaha, iyo barnaamijyada kale ee dabeecadda bulshada. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah, shabakadda waxaa ku jira Wikipedia af Isbaanish ah. Ballaarinta shabakadda waxaa gacan ka geysanaya faafinta iyo howlaha tababarka, taas oo lagu baray inay ku soo uruuriso anteenooyinyada waxyaabaha guriga lagu sameeyo. BuenosAiresLibre waxay soo saartaa shabakaddan iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo barnaamijyo bilaash ah
La aasaasay 1-dii. Sebtember 2007, Wikimedia Argentina waa cutubka maxalliga ah ee Wikimedia Foundation. Wuxuu ka shaqeeyaa faafinta, kobcinta iyo horumarinta ilaha dhaqanka xorta ah, gaar ahaan faafinta mashaariicda la xiriira Wikimedia sida Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikinews, iyo kuwa kale. Sannadkii 2009, waxay ahayd kooxdii masuulka ka ahayd isku-dubaridka Wikimanía 2009 ee Buenos Aires.
Mozilla Argentina waa kooxda faafinta ee mashaariicda Muusil Foundation ee Argentina. Waxay si gaar ah ugu heellan yihiin inay ku faafiyaan isticmaalka barnaamijyada bilaashka ah ee ay soo saartay Mozilla iyada oo loo marayo abaabulka iyo ka-qaybgalka dhacdooyinka kala duwan.
Python Argentina waa koox dhiirrigeliyeyaal iyo horumariyayaal ah luqadda barnaamijka Python ee Argentina. Hawlaheeda waxaa ka mid ah faafinta iyada oo loo marayo wadahadal iyo shirar, iyo sidoo kale horumarinta mashaariicda ku saleysan Python oo leh PyGame ama CDPedia, nooc ka mid ah Wikipedia oo Isbaanish ah oo DVD ah.
Uuntu-ar waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo xarunteedu tahay Argentina, oo loogu tala galay is dhaafsiga khibradaha iyo wadaagista aqoonta nidaamkaan.
Ujeeddadiisu waa inuu ku faafiyo faa'iidooyinka Ubuntu jawiga kaqeybgalka, halkaas oo fikradaha dhammaan adeegsadayaasha lagu soo dhaweynayo hagaajinta nidaamkan hawlgalka cajiibka ah. Sidoo kale, boggooda waxaad ka heli doontaa qalabka aad u baahan tahay si aad uga bilowdo Ubuntu, u xalliso dhibaatooyinka, ama aad si fudud fikradaha isku weydaarsato.
Bulshada GNU Spain. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad fara badan oo ku saabsan Mashruuca GNU iyo dhaqdhaqaaqa softiweerka bilaashka ah: rukhsadaha, halka laga helo oo laga soo dejiyo barnaamijka GNU, dukumiintiyada, falsafada, wararka, iyo bulshada.
Ujeeddada ugu weyn ee Xiriirka Qaranka ee Shirkadaha Barnaamijka Bilaashka ah ee ASOLIF (Associated Software Software Associations) waa in la difaaco oo la dhiirrigeliyo danaha ururada ganacsiga ee software-ka bilaashka ah ee Teknolojiyada iyo suuqa adeegyada, iyada oo loo marayo jiilka iyo / ama taageerada mashaariicda, iyo sidoo kale abaabulka dadaallada looga faa'iideysanayo hannaanka ganacsiga ee Bilaashka ah ee Software, si loo gaaro jiilka hantida si mas'uuliyad leh.
Waxaa la aasaasay bilowgii 2008, ASOLIF maanta waxay kulmisay in ka badan 150 shirkadood oo loo qaybiyay 8 urur goboleed, taas oo ka dhigaysa hogaamiyaha qaybta ganacsiga ganacsiga bilaashka ah ee Spain.
CENATIC waa Hay'ad Dawladeed oo Dawladeed, oo ay kobciso Wasaaradda Warshadaha, Dalxiiska iyo Ganacsiga (iyada oo loo marayo Xoghaynta Isgaarsiinta iyo Bulshada Warfaafinta iyo hay'adda Red.es) iyo Junta de Extremadura, oo sidoo kale leh gudideeda wakiilka ah ee leh ismaamulada bulshada ee Andalusia, Asturias, Aragon, Cantabria, Catalonia, the Balearic Islands, Basque Country iyo Xunta de Galicia. Shirkadaha Atos Origin, Telefónica iyo Gpex sidoo kale waxay qayb ka yihiin Golaha CENATIC.
CENATIC waa mashruuca kaliya ee istiraatiijiyadeed ee Dowladda Spain si kor loogu qaado aqoonta iyo adeegsiga barnaamijyada furan ee furan, dhammaan qaybaha bulshada.
Xirfadda aasaasiga ah waa inay isku muujiso inay noqoto xarun heer sare ah oo heer qaran ah, iyadoo la saadaalinayo caalami ahaan labadaba Yurub iyo Latin America.
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Mexico, una heellan is-weydaarsiga khibradaha iyo wadaagga aqoonta nidaamkaan ku saleysan debian GNU / Linux.
Kooxaha Isticmaalaha Linux (Isbaanish)
AsturLinux: Kooxda isticmaalayaasha Asturian Linux.
AUGCYL: Kooxda isticmaaleyaasha ee Castilla y Leon.
BULMA: Bilowga isticmaalayaasha Linux ee Mallorca iyo Hareeraha.
GLUG: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Galicia.
GPUL-CLUG: Kooxda Linux Users iyo Programmers - Coruña Linux Users Group.
GUL (UCRM): Kooxda Isticmaalayaasha Jaamacadda Carlos III, Madrid.
GULIC: Kooxda isticmaaleyaasha Linux ee jasiiradaha Canary.
HispaLinux: Isbahaysiga Isticmaalayaasha Isbaanishka Isbaanishka.
IndaLitux: Kooxda Isticmaalayaasha Almeria Linux.
Lilo: Linuxeros Locos - Jaamacadda Alcalá de Henares.
VALUX: Ururka isticmaalayaasha Linux ee bulshada Valencian.
Bulshada GNU Mexico. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad fara badan oo ku saabsan mashruuca GNU iyo dhaqdhaqaaqa softiweerka bilaashka ah: rukhsadaha, halka laga helo oo laga soo dejiyo barnaamijka GNU, dukumiintiyada, falsafada, wararka, iyo bulshada.
Mozilla Mexico waa kooxda faafinta mashaariicda Muusil Foundation ee Mexico. Waxay si gaar ah ugu heellan yihiin inay ku faafiyaan isticmaalka barnaamijyada bilaashka ah ee ay soo saartay Mozilla iyada oo loo marayo abaabulka iyo ka-qaybgalka dhacdooyinka kala duwan.
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Mexico, una heellan isweydaarsiga khibradaha iyo wadaagista aqoonta ku saabsan nidaamkan hawlgalka.
Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Mexico
Kooxda Isticmaalaha Linux - Chihuaha (GLUCh)
Kooxda Isticmaalaha Linux - Baja California Sur (GULBCS)
Kooxda Isticmaalaha Linux - Ensenada (ELUG)
Waxay kulmisaa jaamacadaha, ganacsatada, dowlada, kooxaha adeegsadayaasha, haakarisyada, ururada aan dowliga aheyn iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xoriyada aqoonta. Ujeeddadeedu waa in kor loo qaado adeegsiga iyo horumarinta softiweerka bilaashka ah si loogu beddelo xorriyadda dhaqaalaha iyo teknolojiyada.
Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Paraguay
Waxay leedahay goleyaal, liisaska boostada, Muraayadaha Software-ka Bilaashka ah (qaybinta ee . Intaa waxaa dheer, waxay leedahay wiki loogu talagalay mashaariicda iyo dukumiintiyada ay soo diraan dadka isticmaala.
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Uruguay, oo loogu talagalay inay isdhaafsadaan khibradaha iyo inay wadaagaan aqoonta ku saabsan nidaamkan hawlgalka.
Kooxda Isticmaalaha Linux - Uruguay
Waa koox reer Uruguay ah oo adeegsada nidaamka hawlgalka GNU / Linux ee kombiyuutarada. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee kooxdu waa inay faafiyaan adeegsiga iyo himilooyinka GNU / Linux iyo Software Bilaash ah iyo inay noqdaan goob la isku weydaarsado ma aha oo keliya aqoonta farsamada, laakiin sidoo kale fikradaha ku saabsan falsafadda adkeysa Software-ka Bilaashka ah, Xeerka Isha Furan iyo wixii lamid ah.
Waa koox ka mid ah dadka isticmaala Ubuntu, oo fadhigeedu yahay Peru, oo loogu talagalay inay isdhaafsadaan khibradaha iyo wadaagista aqoonta ku saabsan nidaamkan hawlgalka.
Kooxda Isticmaalayaasha Peru Linux
Ujeeddooyinka kooxdu waa inay faafiyaan nidaamka hawlgalka Linux, dhiirrigeliso isticmaalkiisa iyo bariddiisa; iyo sidoo kale taageerida horumarka OpenSource ee dalka.
PLUG ma raadineyso ujeedo dhaqaale, laakiin kaliya waxay u adeegtaa bulshada Linux ee Peru. Ka-qaybgalka kooxda dhexdeeda waxay u furan tahay dhammaan dadka iyo hay'adaha doonaya inay la shaqeeyaan ujeeddooyinka iyo ujeedooyinka kooxda.
Beesha GNU Chile. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad fara badan oo ku saabsan Mashruuca GNU iyo dhaqdhaqaaqa softiweerka bilaashka ah: rukhsadaha, halka laga helo oo laga soo dejiyo barnaamijka GNU, dukumiintiyada, falsafada, wararka, iyo bulshada.
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Chile, oo u heellan is-weydaarsiga khibradaha iyo wadaagista aqoonta ku saabsan nidaamkan hawlgalka.
Mozilla Mexico waa kooxda faafinta ee mashaariicda Muusikada Mozilla ee Chile. Waxay si gaar ah ugu heellan yihiin inay ku faafiyaan isticmaalka barnaamijyada bilaashka ah ee ay soo saartay Mozilla iyada oo loo marayo abaabulka iyo ka-qaybgalka dhacdooyinka kala duwan.
Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Chile
AntofaLinux: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Antofagasta.
UCENTUX: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Jaamacadda Dhexe, Gobolka Metropolitan.
CDSL: Xarunta baahinta barnaamijka bilaashka ah, Santiago.
GULIX: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee IX Region.
GNUAP: Kooxda Isticmaalaha Linux ee Jaamacadda Arturo Prat, Victoria.
GALMADA: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Puerto Montt.
Dhibaatooyinka: Debian Chile, Qaadashada Chile.
Degaanada Desktop: GNOME Chile, KDE Chile.
Kooxda Isticmaala Teknolojiyada Bilaashka ah (Cuba), oo loo yaqaan 'GUTL', waa Bulsho ka mid ah dadka jecel OpenSource iyo Software-ka Bilaashka ah guud ahaan.
Beesha Mozilla ee Cuba. Waxaa aasaasay oo hogaaminaya xubno ka tirsan Jaamacadda Cilmiga Kombuyuutarka ee Cuba.
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Ecuador, oo loogu talagalay inay isdhaafsadaan khibradaha iyo wadaagista aqoonta ku saabsan nidaamkan hawlgalka.
Kooxda Isticmaalaha Linux - Ecuador
Xariirka loogu talagalay fidinta adeegsiga iyo himilooyinka GNU / Linux iyo Software Bilaash ah, iyo bixinta adeegyo iyo macluumaad la xiriira nidaamyada GNU / Linux.
Kooxda Isticmaalayaasha GNU ee Venezuela waa koox diiradda saareysa bixinta iyo wacdinta falsafadda iyo himilooyinka mashruuca GNU iyo FSF (Aasaaska Barnaamijka Bilaashka ah) ee Venezuela iyada oo loo marayo horumarinta, iyo isticmaalka, barnaamijyada, daabacaadda iyo dukumintiyada ku saleysan barnaamijka bilaash ah
Waa koox adeegsadayaal Ubuntu ah, oo fadhigeedu yahay Venezuela, oo loogu talagalay inay isdhaafsadaan khibradaha iyo wadaagista aqoonta nidaamkaan ku saleysan debian GNU / Linux.
Kooxda Users Venezuela Linux (VELUG) waa urur bixiya helitaanka macluumaad aad u tiro badan oo laxiriira GNU / Linux operating system iyo Free Software.
Xubnaheenu waxay soo saaraan waxyaabo badan oo ka mid ah liistada dirista. Dhammaan qalabka farsamada, natiijada su'aalaha iyo jawaabaha lagu beddelay VELUG, waxaa laga heli karaa keydka taariikhiga ah ee liisaska dirista.
Jabhadda Kacaanka ee Teknolojiyadaha Bilaashka ah (FRTL) waa garabka bidix ee wadajirka ah, oo ku wajahan faafinta, kor u qaadista iyo adeegsiga tikniyoolajiyadaha bilaashka ah ee bulshada guud ahaan, raadinta wadaagga iyo dhiirigelinta xoraynta xogaha iyo wax ku biirinta madaxbanaanida tignoolajiyadeed ee lagu aaminay ee ku saabsan Qorshaha Wadanka Hooyo marka laga eego dhanka bini-aadamka marka laga eego dhinaca hantiwadaagga qarnigii XXI.
Bulshada Bilaashka ah ee Bartamaha Ameerika (SLCA) waa goob kulan oo loogu talagalay kooxaha abaabulan ee kaladuwan ee ka shaqeeya horumarinta iyo faafinta barnaamijka bilaashka ah ee Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica iyo Panama.
Waxaan isugu nimid sidii aan u wada xiriiri lahayn, xoog u biirin lahayn, u wadaagi lahayn aqoonta iyo waaya aragnimada; iyo wixii ka sarreeyaba, si loo dhiirrigeliyo isbeddel ku wajahan bulshooyinka halka xorriyadda barnaamijyada ay gacan ka geystaan ​​jiilka iyo wadaagista aqoonta bilaashka ah.
Kooxaha Isticmaalayaasha Linux - Bartamaha Ameerika
GULNI: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Nicaragua
GULCR: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee Costa Rica
GUUGKooxda Isticmaalayaasha Unix ee Guatemala
SVLinux: Kooxda Isticmaalayaasha Linux ee El Salvador
Aasaaska Software-ka Bilaashka ah waa hooyada DHAMMAAN ururada barnaamijyada softiweerka ah waxaana abuuray Richard M. Stallman si uu u maal galiyo una taageero mashruuca GNU. Waqtigan xaadirka ah, waxay gacanta u galisaa adeegsadaha Barnaamijka Bilaashka ah ee Bilaashka ah adeegyo badan oo loogu talagalay bulshada si ay u horumariyaan oo wax soo saar u yeeshaan
Waxaa jira ururo kale oo laxiriira Free Software Foundation, oo isla ujeeddadaas wadaaga isla markaana fuliya shaqadooda heer maxalli ah ama heer qaaradeed. Kaasi waa kiiska Free Software Foundation Yurub, ka Free Software Foundation Latin America iyo Aasaaska Barnaamijka Bilaashka ah ee Hindiya.
Ururadan maxaliga ahi waxay u taageeraan Mashruuca GNU si la mid ah ta Free Software Foundation.
Waa hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo fadhigeedu yahay Mareykanka oo shaqadeeda ugu weyni tahay isku dubaridka Maalinta Xorriyadda Software-ka adduunka oo dhan. Dhamaan shaqaaluhu waxay ku tabarucaan waqtigooda.
OFSET waa urur aan macaash doon ahayn ujeeddadiisuna waa inay dhiirrigeliso horumarinta barnaamijyada bilaashka ah ee loogu talagalay nidaamka waxbarashada iyo guud ahaan waxbarista. OFSET waxay ka diiwaangashan tahay Faransiiska laakiin waa urur dhaqamo badan leh oo xubno ka yihiin adduunka oo idil.
Ma taqaanaa urur kasta oo muhiim ah iyo / ama bulsho la xiriirta barnaamijyada bilaashka ah ee aan la sheegin? Noo soo dir talinta.